Gavoa resort flat Itamaracá Maria Farinha Igarassu - I-Airbnb
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguJoseph
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uJoseph iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-CHECKIN kunye ne-CHECKOUT AKUKHO FLEXIBLE!!! I-Flat ejongene nolwandle kunye nesiqithi sesithsaba sendiza e-Igarassu kwaye ijongene ne-Imaracá kwisiteshi saseSanta Cruz, kufuphi noMaria Farinha kunye ne-Imaracá. Igumbi lokulala, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela, i-swimming pool, i-barbecue, imidlalo / igumbi le-tv, i-gym, inkundla, i-marina yeenqanawa kunye ne-jetski, i-nautical tours kunye nevenkile yokutyela e-marina. Inelifti, ukhuseleko oluxhobileyo lweeyure ezingama-24. Indawo yokupaka, indlela yokubaleka yeenqwelomoya ezincinci, i-helipad. Ibala leenqwelomoya elikufuphi.
Iflethi/indlu inegumbi lokuhlala, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi kwaye ine-TV, ifriji, isitovu, i-air conditioning, izitya, i-cutlery, iiglasi, ifenitshala kunye nempahla.
Le condominium inequla lokuqubha, ibala lokudlala labantwana, i-marina yezikhephe kunye nokhenketho lwaselwandle, indawo yokutyela, ukufikelela elunxwemeni, indawo yokosa inyama, indawo yokupaka, imidlalo/igumbi le-tv, ijimu kunye nenkundla. Kukho umgaqo weenqwelomoya wenqwelomoya encinci enokukhanya kakhulu kunye nehelikopta yeehelikopta. Kukwakho nebala leenqwelomoya elikufutshane leenqwelomoya ezincinci.
4.71 out of 5 stars from 172 reviews
4.71 · Izimvo eziyi-172
Icondominium ikwindawo ezolileyo, enabantu abambalwa kwimidlalo yaselwandle kunye nokuzonwabisa. Kukho iHlathi leAtlantiki ngasemva kwe-condo. Isiqithi sase-Itamaracá kunye nesiqithi sase-Coroa do Avião ziphambi kwe-condominium, kwaye zinokufikelelwa ngeekhenketho ezithengiswa kwi-condominium's Marina. Umbindi weNova Cruz yi-2 km kude. Umbindi we-Igarassu yi-15km kude. Kufuphi neVeneza Water Park eMaria Farinha (malunga ne-5km) usebenzisa isikhitshane esisuka eNova Cruz.
Ndiza kufumaneka ngeselfowuni ngayo nayiphi na imfuno.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Igarassu